यसरी फसे एसएसपी अधिकारी :सुरुमा मस्ती,पैसाको बार्गेनिङ नमिलेपछि बलात्कार | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ यसरी फसे एसएसपी अधिकारी :सुरुमा मस्ती,पैसाको बार्गेनिङ नमिलेपछि बलात्कार
यसरी फसे एसएसपी अधिकारी :सुरुमा मस्ती,पैसाको बार्गेनिङ नमिलेपछि बलात्कार
साउन ४, २०७७ |
रन्जन अधिकारी |
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) नेपालका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र कुमार अधिकारीले यही माघ १ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास पाउँदै थिए। जागिरे जिवनको समाप्तितिर रहेका ५२ वर्षीय अधिकारी यही बेला यौन काण्डमा मुछिन पुगे, त्यो पनि आर्थिक लेनदेन नमिल्दा।
साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी असार २९ गते भएको १७ एसएसपीको सरुवा लिस्टमा एसएसपी अधिकारी पनि छन्। हाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय, लामापाटन, पोखराका प्रमुख उनी त्यहाँबाट प्रधान कार्यालय, हलचोक, कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा भए। उनको स्थानमा मानव श्रोत विभागबाट बिदुर खड्का आउँदैछन्।
सरुवापछि पोखरा छाड्ने तरखरमा रहेका अधिकारीले काठमाण्डौ जानुअघि इन्जोय गर्ने प्लान बनाए। पहिलेदेखि नै चिनजानमा रहेकी चितवन बस्ने एक ३० वर्षीया युवतीलाई उनले लामापाटन स्थित क्वार्टरमै बोलाए। उनी अधिकारीले बोलाउँदा आइरहने युवती रहेको बुझिएको छ।
बुधबार पनि उनी पहिले झैं आईन्। दाङ हेकुली ३ घर भएकी ति युवती (बलात्कार मुद्धा रहेकाले वास्तविक नाम गोप्य) चितवनबाट पोखरा आइन्। सशस्त्र प्रहरीकै भगौडा सिपाही उनले आफूलाई मञ्जु केसी भनेर चिनाउँदै आएकी थिइन्। उनको फेसबुक र भाइबरमा नाम समेत एम.के. नै छ।
उनी भरतपुर ४ मा डेरामा परिवासँग बस्दै आएकी छिन्। श्रीमान् समेत साथमै छन्। पोखराबाट एसएसपीले बोलाएपछि बिहान साढे ५ नै उनी भरतपुरबाट स्कुटर चढेर पोखरा हानिइन्। बिहान साढे ८ बजेतिर पोखरा आइपुगिन्। लामापाटन पुग्दा ९ बज्नै लागेको थियो।
युवती आफैले एसएसपीलाई गेटमा सोध्यो भने भाञ्जी हो, छाडिदिनु भन्नु है भनेर म्यासेज गरिन्। त्यतिबेला एसएसपी निवासमा थिएनन्। उनी सरासर कोठामा गईन्। एसएसपी आउन ढिला भएपछि खाना मागेर खाइन् र एसएसपीकै क्वार्टरमा बसिरहिन्।
एसएसपी अधिकारी आए। चिया पिउने समयमा मदिरापान सुरु भयो। रसरंगमा झुमे। एसएसपी फिट्टु हुने गरी पिएपनि युवतीले धेरै पिइनन्। नशा लाग्दै गएपछि युवतीले १० लाखको डिमाण्ड गरिन्। दुई जनाबीच विवाद सुरु भयो। पैसा नदिए बलात्कार केसमा फसाइदिने उनको नियत रह्यो।
त्यसपछि, डिमाण्डमा टसमस भइनन्। एसएसपीले ५ लाख लिऊ, अरु म जुटेपछि दिन्छु भनेर अनुनयविनय गरे। आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा, जागिर जोगाइदिन आग्रह गरे। उनले तत्काल ५ लाखको जोहो गरे। एक डिएसपी पनि बोलाएर युवतीसँग मोलमोलाई सुरु भयो। युवती मानिनन्।
उनी रिसाइन्। टेबलका सिसा फुटाइन्। रक्सीका गिलासहरु पनि फुटे। बेडरुमदेखि कोठाका सामान छरपस्ट बने। पैसा खोजेर आउँछु भनेर ५ लाख दराजमा राखेर एसएसपी निस्किए। केहीबेरपछि मोबाइल अफ भयो। रक्सीले झ्याप भएका एसएसपी झाडीमा लडेका रहेछन्।
यता, युवतीमा अब एसएसपी भागे भन्ने ठानेर आक्रोश बढ्यो। यतिबेला दिउँसो साढे १ बजिसकेको थियो। युवती बर्बराउँदै ‘एसएसपीले बलात्कार गरे, खाना खुवाउन बोलाएका थिए, लठ्याउने औषधि खुवाए’ भनेर नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल नम्बर १०० मा फोन गरिन्। एसएसपी नै बलात्कार काण्डमा मुछिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा तरंग आयो।
फोन रिसिभ गरेका प्रहरी झसंग भए। तत्काल जिल्ला कमाण्डर एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठलाई घटनाबारे जानकारी गराए। त्यसपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी घनश्याम अर्याललाई घटनाबारे जानकारी गराइयो। तत्कालै ती महिला भएको ठाउँमा प्रहरी परिचालन भयो। प्रहरी एसएसपी क्वार्टर पुग्दा कोठामा युवती मात्र थिइन्।
साँच्चै प्रहरी आएपछि उनी झसँग भइन्। श्रीमानले थाहा पाउँछ भनेर अब केस अघि नबढाए हुन्न भन्न पो थालिन्। प्रहरीले उनलाई मेडिकल चेकजाँचका लागि अस्पताल लगे। एसपी श्रेष्ठले कार्यक्षत्र रहेको वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका प्रमुख इन्स्पेक्टर प्रकाश थापालाई नेतृत्व गरेर लामापाटन जान आदेश दिए। तर अधिकारी भेटिएनन्। उनी झाडीमै लडिरहेका थिए।
फेरि, एसपीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कै डिएसपी सुवास हमालको नेतृत्वमा अर्को टोली पठाए। उनी अझै भेटिएनन्। गाडी र पिएसओ भित्रै थिए, मान्छे कहाँ छ ? पिएसओलाई समेत अत्तोपत्तो छैन। वडा प्रहरी र जिल्ला प्रहरी दुवै टोलीले एसएसपी नभेटिएको रिपोर्टिङ गरे।
सुरक्षा निकायकै वरिष्ठ अधिकारी यति ठूलो काण्डमा मुछिएपछि एसपी श्रेष्ठले माथिल्लो निकायमा खबर गरिरहेका थिए। एसएसपी नभेटिएको जानकारी पुनः डिआईजी अर्याललाई गराए।
लगत्तै अर्यालले एसपी श्रेष्ठलाई आफै फिल्डमा जान आदेश दिए। एसपी श्रेष्ठ लामापाटनमा पुगेको केहीबेरमा सशस्त्रको प्रदेश कार्यालयका रुपमा रहेको मुक्तिनाथ बाहिनीका डिआईजी कविन्द्रमान श्रेष्ठ, एसएसपी सहितको टोली घटनास्थल पुग्यो। (डिआईजी श्रेष्ठ पनि असार २९ गते नै भएको १४ डिआइजी सरुवा सूची अनुसार प्रधान कार्यालय जाँदैछन्।)
एसएसपी अधिकारी गेट बाहिर नगएको गेटमा ड्युटी गर्नेले बताए। गाडी र पिएसओ पनि भित्रै रहेकाले पनि बाहिर नगएको अनुमान लगाइयो। लामापाटन क्षेत्र ठूलो एरियामा फैलिएको छ। झाडीहरु पनि भएकाले प्रहरीले झाडीतिर खोज्न सुरु गरे। झाडीमा लडिरहेको अवस्थामा उनी भेटिए।
तत्काल एसएसपी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको मुचुल्का उठाउने काम भयो। यो काम एसपी सहितको टोलीले नै गर्यो। सो क्रममा सामानहरु छरपस्ट, गिलास सिसाहरु फुटेको प्रमाण संकलन भयो।
यस्तै, भियाग्रा जस्तै काम गर्ने एलेग्रा नामक ४ वटा ट्याबलेट भएको एक पत्ता सकिएको अवस्थामा, विर्य पुछिएको भनिएको रुमाल सबै बरामद गरियो। पौने ६ बजेतिर एसएसपी अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुर्याइएको थियो।
घाँटीमा चक्कु राखेर मुख थुनेको भनेर युवतीले बयान दिएकी छन्। शारीरिक बल प्रयोग गरेको भनिएपनि स्वास्थ्य जाँचका क्रममा कुनै बलजफ्ती भएको पुष्टि नभएको श्रोत बताउँछ। श्रोत भन्छः ‘अब काठमाण्डौ जाने भएको कारण युवतीलाई दिइएका यसअघिका केही शर्त पुरा गर्नुपर्ने थियो होला। त्यही क्रममा १० लाख मागिन्। ५ लाख मात्रमा उनले मानिनन्।
५ लाखको जोहो गर्न एसएसपी निस्किए, तर रक्सी लागेका उनी झाडीतिर नै ढले। धेरै समय फोन हान्दा ब्याट्री सकियो होला। जब मोबाइल अफ भयो त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गरिन्। प्रहरी पुगेर श्रीमानलाई थाहा हुन्छ, यो लफडामा नफसम् भनेपछि यदि ५ लाख पनि दराजमा चाबी नलगाएको अवस्थामा हुन्थ्यो भने त्यही बोकेर उनी चितवन गइसक्ने रहिछन्।’
ति युवती विहीबार १ बजेनै प्रहरीलाई म जान्छु भनेर हिँडिसकिन्। एसएसपी अधिकारी हिरासतमा छन्।” अहिले उहाँ नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ” डिएसपी हमालले भने। ‘बयान लिने काम भएको छैन ?’ भन्दा हमालले थपे- ‘२१ दिन बाँकी छ। अनुसन्धान अघि बढ्दै जान्छ नि।’
दिनदहाडै संगठनका वरिष्ठ अधिकारीले सुरक्षाकर्मीकै चोघेराभित्र स्थित क्वार्टरमा गरेको यस्तो हर्कले संगठनको बदनाम भएको छ।
यसअघि सशस्त्रका डिआईजी रञ्जन कोइराला श्रीमती मारेको प्रमाणित भएपछि हिरासतमै छन्। सशस्त्र मुख्यालयले बुधबार नै एसएसपी अधिकारीलाई निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ।
यसअघि, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग जोडिएको बलात्कार काण्डभन्दा पनि बढी पुगेर यहाँ युवतीले आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि फसाएको देखिन्छ। पहिलेदेखि नै मोजमस्ती गर्ने स्वभाव र सम्पर्कमा रहेकी युवतीलाई थप ५ लाख दिन नसकेकै कारण युवतीको ब्ल्याकमेलिङको शिकार बन्न पुगे एसएसपी अधिकारी।
जीवनको उत्तरार्द्ध र प्रतिष्ठित पेशाको अन्तिम समयतिर उनी खोरमा जाक्किने भए। बुढ्यौली बैंशको उन्मादलाई काबुमा राख्न नसक्दा कर्म अनुसारको फल अधिकारीले भोग्नेछन्।
पछिल्लाे - निल्नु न ओकल्नुको जबर्जस्त अवस्थामा पुर्‍याएपछि मैले जागिर छोड्ने निर्णय गरे
अघिल्लाे - पोर्चुगल अपडेट:२ सय ४६ संक्रमित थपिए,कुल संक्रमित ४८ हजार ६ सय ३६